တောတွင်းခရီး – Grab Love Story
တဖြောက်ဖြောက်ရွာနေတဲ့မိုးည တည…ကျွန်တော် အိပ်ယာပေါ်မှာလဲလျောင်းရင်း မျက်နှာကျက်ဆီသို့သာ ငေးမောရင်း လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတခုကို စဉ်းစားလို့နေမိပါတော့တယ်… ကုတင်ဘေးမှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ မိနစ် ၃ဝလောက်က ဟန်နီမွှေနှောက်ထားတဲ့ အိပ်က ပွင့်ရက်သား..သူမကတော့ ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ခံစားချက်မဲ့တဲ့မျက်နှာ၊ ငြင်းသွဲ့စွာ အသက်ရှူရင်း ဘေးတစောင်းလဲလျောင်းကာ စောင်ထူထူအောက်ကနေ ကျွန်တော့်ကို ပွတ်သတ် ယုယလျက်… ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာတော့ မမျှော်လင့်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သူမကိုတွယ်တာစိတ်နဲ့အတူ ပြောမပြတတ်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတခုကို ခံစားနေရတာနဲ့အတူ ရင်ထဲက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နွေးထွေးတဲ့ အသက်ရှုသွင်းထုတ်တဲ့လေ၊ နူးညံ့နွေးထွေးတဲ့ အသားအရေနဲ့ သူမရဲ့သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့ စတဲ့ အတိတ်က ဖြစ်ပျက်များကိုလည်း ပြန်ပြောင်းစဉ်းစားရင်း နေပါဦး…အဲ့ဒါဘာတွေလဲ…ငါမူးနေတာလား….အာ…ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ မသိပါဘူး… အေးမြတဲ့လေနဲ့အတူ မရေရာမှုတွေ ကျွန်တော့်ကို ကြောက်လန့်စရာ တွေးခေါ်မှုတခုဆီတွန်းပို့လိုက်ပါတယ်
အထူးသဖြင့် ကျွန်တော် ခုလေးတင်ရရှိလိုက်တဲ့ အပြုအမူလေးတခုကလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်ကို စတင်နိုးထစေခဲ့တာကလဲ တကြောင်းပေါ့ဗျာ…ကျွန်တော်ဘေးတစောင်းအိပ်လိုက်ရင်း ဟန်နီ့ရဲ့ မျက်နှာကို တလက်မချင်း တလက်မချင်း စေ့စေ့ကြည့်ကာ puzzle ဆော့သလို စဉ်းစားမိနေပါတယ်… ဒါပေမယ့် ဘာခံစားမှုမှ ဖြစ်မလာတဲ့အပြင် ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတာကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ အဖိုးတန်ညီမလေးရဲ့ နူးညံ့အပစ်ကင်းတဲ့ မျက်နှာလေးပါပဲ..ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကို ခေါင်းထဲမှာ အတန်ကြာ စဉ်းစားမိတဲ့နောက်မှာတော့ ငါ နှစ်သိမ့်မှုတခုကို ရှာတွေ့မှဖြစ်တော့မယ်လို့ စဉ်းစားမိတာနဲ့အတူ…ရွက်ဖျင်တဲကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာတဲ့ လေနုအေးနဲ့အတူ ပတ်ဝန်းကျင်က ပိုးကောင်လေးတွေရဲ့ အော်မြည်သံကလည်း ကျွန်တော်ကို ငိုက်မျဉ်းစ ပြုစေပါတော့တယ်.. ထိုစဉ်မှာပဲ ကျွန်တော့်ညီမလေးရဲ့ ရုတ်တရက်တွန်းထုတ်လိုက်တာနဲ့အတူ စဉ်းစားခန်းကနေ လွတ်မြောက်သွားတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့်ညီမလေးရဲ့ စိုစွတ်စွတ်ဖြစ်နေတဲ့ ပိပိလေးကို မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထားရောက်အောင် လှည့်လိုက်ပါတော့တယ်… ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ကျွန်တော် ပူနွေးတဲ့ အထိအတွေ့တခုကို ကျွန်တော့်အောက်နားဆီက
ရလိုက်တဲ့တခဏမှာ ကြည့်လိုက်မိတဲ့အခါတွင်တော့ လျှာဖျားလေးနဲ့ ရစ်ပတ်သိမ်းသွင်းရင်း နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ရသလောက်စိရင်း ကျွန်တော့်ပစ္စည်းအဆုံးနားထိရောက်အောင် စုပ်နေတဲ့ ညီမလေးကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်..တခြားတဲတွေဆီကတော့ လှုပ်ရှားမှုတစုံတရာ အသံတစုံတရာမကြားရဘဲ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်… ညီမလေးရဲ့ နူးညံ့ပြီး အမွှေးနုလေးများနဲ့ ပိပိကိုထိတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ ကုန်ရထားကြီးတစင်းနဲ့ တိုက်မိမလိုဖြစ်သကဲ့သို့ ရင်ခုန်လှုပ်ရှားပြီး ကျွန်တော်ရဲ့ ပစ္စည်းကိုလည်း တင်းပေါက်မတတ် ပြန်လည် ထောင်မတ်စေပါတယ်..မကောင်းဘူးလို့ထင်ရတဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုလည်း ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဆက်လက်တွန်းပို့နေပြန်တယ်… ကျွန်တော့် ရမက်ဆန္ဒတွေရဲ့ စေ့ဆော်မှုနဲ့အတူ အဖော်မဲ့နေတဲ့ ညီမလေးရဲ့ ပိပိလေးကို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်း အစုံနဲ့ နမ်းပေးရာကစတင်လိုက်ပါတော့တယ်..ကျွန်တော့်အောက်နားဆီကလဲ ထူးခြားတဲ့အသံလေးတသံထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက် ကြည့်လိုက်ရာမှာတော့ ညီမလေးဟာ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းတချောင်းလုံးကို အဆုံးထိဆွဲမြိုလိုက်ပီး ပြန်လည်ထုတ်ကာ ကျွန်တော့်ကို နွမ်းလျလျအပြုံလေးနဲ့အတူ သူ့မလျှာနဲ့သူမ နှုတ်ခမ်းကိုသပ်ရင်း မော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်.. မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ ကိုကြီး သမီးကို မနက်စာကျွေးမှာလား… ကျွန်တော် သူမကို သေချာစိုက်ကြည့်ရင်း အပြုံးတချက်ပဲ တုံ့ပြန်လိုက်ပါတော့တယ်..ကျွန်တော် သူမရဲ့ပိပိလေးကို လျှာနဲ့မွှေရင်း အတွင်းပိုင်းးကို နက်နိုင်သမျှနက်နက်ရောက်အောင် ထိုးထည့်သလို အစိလေးကိုလည်း လျှာနဲ့ပတ်ချာလည် မွှေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သူမဆီက ကျေနပ်စွာညဉ်းတွားလိုက်သံက ကျွန်တော့်ကို ပိုပြီး မြန်မြန်နဲ့ ကောင်းကောင်းသူမအစိကို ကလိဖို့တွန်းအားပေးလိုက်သလိုပါပဲ
ကျွန်တော် သူမအစိကလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းလိုက် စုပ်လိုက်လုပ်တော့ သူတချက်တုန်ကနဲဖြစ်သွားပြီး သူမရဲ့ လက်အစုံက ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကို ဂွင်းတိုက်နေရာကနေ တဖန်ပြန်ပြီး ကျွန်တော့် ပစ္စည်းကို ငုံထားသလို အသံတွေလဲထွက်လို့ပေါ့.. သူမရဲ့ ပိပိမှာ အရည်တွေရွှဲလာသလို အလိုက်သင့်လေး စကောဝိုင်းလှည့်သလိုပါ လှုပ်ရှားပေးလာတော့တယ်..ကျွန်တော့်ရဲ့ ပစ္စည်းဟာလည်း သူမရဲက နှုတ်ခမ်း၂လွှာကြားမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသလို အရည်ကြည်တွေရွှဲလာတာကိုလည်း သူမက ခပ်မြန်မြန်ပဲမျိုချလိုက်ပါတယ်..လက်တဖက်ကလည်း ကျွန်တော် ဝှေးစေ့တွေကို ကိုင်လို့ဗျာ.. ကျွန်တော်သိတယ် ကျွန်တော်က ပြီးချင်နေပေမယ့် သူမရဲ့ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသာပေါ်လာတဲ့ ငြီးတွားသံအရ သူမက မပြီးနိုင်သေးဘူးဆိုတာကို..အဲ့တော့ ကျွန်တော့်ဗျူဟာပြောင်းရပြီပေါ့ဗျာ.. လက်တဖက်ကို သူ့နို့တဖက်ကို ညစ်နယ်နေသလို နောက်လက်က လက်၂ချောင်းကို အသာကောက်ပြီး သူမရဲ့ အင်မတန်ဆာလောင်နေတဲ့ ပိပိထဲကိုထည့်ကာ g-စ့ပေါ့. ကိုကြိုးစားရှာကလိပေးရင်း လက်မကိုတော့ အစိလေးပေါ်တင်ကစားရင်း လျှာကိုလဲ အစိကို မွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်၊ ကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ tasking လုပ်လိုက်ရတဲ့အချိန် တခဏအတွင်းမှာတော့ သူမဆီကထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပြင်းပြတဲ့ ငြီးတွားသံ၊ ခြေထောက်အစုံကလဲ တဆတ်ဆတ်တုန်၊ ကျွန်တော့်အသားချောင်းကိုလဲ အားရပါးရစုပ်တဲ့အသံတွေ စတာတွေက တပြိုင်တည်း ဖြစ်နေပါတော့တယ်.. သူမဆီကလည်း ကျွန်တော့်အသားချောင်းကို စုပ်ကစားနေတဲ့အရှိန်မပျက်သွားပေမယ့် သူမရဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေကို ကွေးလိုက်ဆန့်လိုက် လုပ်လိုက်၊
ခြေထောက်တခုလုံးလဲ လှုပ်ရှားနေတာကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်လဲ ကိုယ့်ဘက်ကတာဝန်မလစ်ဟ်တေင်းရလေအောင် ပိပိတခုလုံးကို လျှာနဲ့ကစားရင်းနဲ့ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကာမရည်တွေကို သူမပါးစပ်ထဲ ပန်းထုတ်လိုက်မိပါတော့တယ်..သူမကလဲ မနေ့က အတွေ့အကြုံရှိထားတဲ့အတွက် တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိပဲ နောက်ဆုံးတစက်ထိကို မျိုချပလိုက်ပါရော.. သူမအနဲငယ်မောသွားဟန်နဲ့ ကျွန်တော့်ဒစ်ထိပ်ဖျားကို လျှာနဲ့ယက်နေတုံး ကျွန်တော်က အားနဲနဲပိုထည့်ပြီးခပ်မြန်မြန်လုပ်လိုက်တော့ သူမတကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန် အားး…..ဆိုပြီး သံရှည်အော်ဟစ်သံနဲ့အတူ ကျွန်တော်လျှာပေါ်ကိုလဲ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အင်မတန်အရသာရှိတဲ့ မွှေးလှတဲ့ အရည်တချို့ ရောက်လာပါတော့တယ်…ကျွန်တော်တို့ အရင်ကလဲ ခုလိုလုပ်ခဲ့ဖူးကြပေမယ့် ဒီတခေါက်မှာလဲ ထူးခြားဆန်းသစ်နေတုံးပါပဲ…. မိနစ် ၂ဝလောက်အကြာမှာတော့ အိပ်ယာကို သက်သေမကျန်အောင် သေသေချာချာသိမ်းထားပြီးတဲ့အပြင် ကျွန်တော်ပစ္စည်းအားလုံးကို ထုပ်ပိုးသိမ်းဆည်းကာ အန်နာ အဝတ်အစားလဲတာကိုစောင့်နေလိုက်ပါတော့တယ်၊ သူမက သူမရဲ့ တင်းရင်းပြည့်ဖြိုးတဲ့ ရင်သားနဲ့ စွံ့ကားနေတဲ့ တင်ပါးကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ အနက်ရောင် အသားကပ်အင်္ကျီ ကိုအောက်ကခံပြီးအပေါ်ကနေဘလောက်စ်အင်္ကျီရှည်ကိုဝတ်ဆင်ထားပေမယ့်ပါးလွှာတဲ့အင်္ကျီကြောင့်အကုန်ထွင်းဖောက်မြင်နေသယောင်ထင်ရပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် အသားကပ်အင်္ကျီက သူမပစ္စည်းရဲ့ အမြောင်းလေးကိုတောင် မြင်နေရစေပါတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ အနက်ရောင် ရေကူးဘောင်းဘီနဲ့ စပို့ရှပ်နက်ပြာ ဘော်ဒီဖစ်ကို ဝတ်ထားပါတယ်… ရယ်စရာကောင်းတာတခုကတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ရေကူးဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ ဝတ်ထားကြပေမယ့် သူငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ သူတဲထဲကနေ တောင်တက်ခြေအိတ်ရှည်နဲ့ မျက်စိရှုပ်စရာအဝတ်အစားပွပွတွေဝတ်ပီးထွက်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ကို အူကြောင်ကြောင်ငေးကြည့်နေတုံးပဲ သူ့ရည်းစားကတော့ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ထွက်လာတာကို မြင်ပြီးရယ်မောမိပါတယ်… ကျွန်တော်တို့တသိုက် တောလမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးအတိုင်း ၃မိနစ်လောက်လျှောက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲ တည်ငြိမ်တဲ့ ရေအလျဉ်နဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်တစင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်..တကယ့်ကို သဘာဝက လှလှပပ ဖန်တီးထားတဲ့နေရာဗျာ…ခင်ဗျားတို့ မြင်ယောင်ကြည့်စမ်းပါ..ခပ်ပြေပြေလေး လျှောဆင်းသွားတဲ့ မြစ်ကမ်းပါး သစ်ပင်တွေကလည်း စိမ်းစိုလို့ မနီးမဝေးမှာလည်း ၁၄ပေလောက်သာမြင့်မယ့် ရေတံခွန်အသေးစားလေးအပြင် တဖြည်းဖြည်းကျယ်သွားပြီး ရေကူးကန်ဝိုင်းလေးလိုဖြစ်နေတဲ့ နေရာလေးရယ် ရေစီးကလည်း သာသာနဲ့ နှေးနှေးလေး ရေလေးတွေက ကန်အကျော်မှာ ရှိတဲ့ ကျောက်ဆောင်လေးတွေကို လှိုင်းခတ်နေပြီး ရှေ့မှာတော့တဖြည်းဖြည်း ပြန်ကျဉ်းသွားပြီး ပိုမတ်တဲ့ ရေတံခွန်တခုစီ ဦးတည်စီးဆင်းနေတယ်ဗျ…ကျွန်တော်တို့တွေ မြစ်ကမ်းပါးကနေ ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားဆင်းသွားကြပြီး ရေကူး ပျော်ရွှင်စွာ ရယ်မော၊ ယူလာတဲ့ ဘီယာအနည်းငယ်ကို သောက်လို့အပန်းဖြေနေကြမိတယ်.. နာရီအတော်ကြာအောင် ရေထဲမှာဆော့လိုက် ကမ်းခြေမှာနားလိုက် ရေကူးကန်ထဲ ဆော့တဲ့ကစားနည်းလိုဟာမျိုးဆော့လိုက်တဲ့ အချိန်တွေကုန်မှန်းမသိကုန်လွန်ခဲ့ကြတယ်၊ ညနေခင်း ၃နာရီလောက် နဲနဲနေစောင်းချိန်မှာတော့ အဖွဲ့ကိုယ်စီ အတွဲကိုယ်စီ ခွဲကြပြီး အချို့က ကမ်းခြေမှာ၊ လိင်ဆက်ဆံမဲ့အချို့က တောထဲဝင်၊ တချို့အတွဲတွေကတော့ တဲရှိရာပြန် စသဖြင့်
ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ လှုပ်ရှားကုန်ကြတယ်… ကျွန်တော်ကတော့ ရေတံခွန်လေးနားမှာရှိတဲ့ ကမ်းခြေနဲ့အဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့ ကျောက်တုံးတခုအပေါ်တက်ထိုင်နေတုံးမှာ သူမ ကျွန်တော့်အနားရောက်လာပြီး ရေထဲကနေကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေပေါ်လက် အသာမှေးတင်ရင်း မေးစေ့လေးကို ကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်တင်ကာ ပြုံးပြီး ကြည့်နေပါတယ်၊ ကျွန်တော်လည်း သူမကို ပြန်ပြုံးပြလိုက်မိတယ်၊ အနည်းငယ်သောက်ထားလို့ ရီဝေဝေဖြစ်နေတဲ့မျက်လုံး၊ ဖြူဖွေးလှပတဲ့ သွားလေးတွေ၊ ဖူးငုံငုံ နှုတ်ခမ်းအစုံတွေကို ငေးနေမိတယ်၊ သူမကတော့ ကျွန်တော့်ပေါင်ကို သူမလက်နဲ့ ပွတ်သတ်လို့….“ကိုကို ညီမလေးကို ဒီနေရာမှာ လုပ်ပေးပါ” သူမ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို ပြောလိုက်ပါတယ်…ကျွန်တော်ခေါင်းကိုသာ ရမ်းပြရင်း….“လုံးဝပဲ..ကိုကို့သူငယ်ချင်းတွေကို မောင်နှမတွေ ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတဲ့ ရှိုးမျိုးတော့ မပြဘူး…လာခဲ့…အမူးသမားမလေး” ပြောရင်း ရေတံခွန်လေး အကွယ်သို့ ၂ဦးသားရေကူးသွားလိုက်ကြပါတယ်… ရေတံခွန်အကွယ်လေးကမ်းပါးပေါ်ရောက်တဲ့အခါ သူမရေထဲကနေ ပလုံကနဲအသံမြည်အောင်ကို ကိုယ်တပိုင်းလောက် ရေထဲကတက်လာပြီး ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားနို့၂လုံးကို ဝင်နေစေလျက်အရည်လဲ့နေတဲ့မျက်လုံး၊ တုန်ရီနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းများစတဲ့ ဆာလောင်ပြင်းပြမှုကိုဖော်ပြတဲ့လက္ခဏာများနဲ့ ထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်…ကျွန်တော် စရောက်ကထဲကလေ့လာထားတဲ့ အခုနေရာလေးကရေမှုန်များက လုံခြုံစွာကာထားပေးပြီး မြင်ရင်တောင် အလွန်ဆုံး ရေထဲမှာရှိတဲ့ အတွဲ၁တွဲသာမြင်နိုင်တဲ့နေရာလေးပါ..ရောက်ပီဆိုတာနဲ့ပဲ သူမက ကျွန်တော့်ရေကူးဘောင်းဘီတိုကိုကျွမ်းကျင်စွာဆွဲချွတ်ပြီး ကျွန်တော့် ဖွားဖက်တော်ကို လေကောင်းလေသန့်ရှုစေတယ်ဗျ..သူမကိုယ်တိုင်လည်း ရေကူးဝတ်စုံကြိုးကို အသာဖြေချပြီး သူမရဲ့ နူးညံ့စိုစွတ်နေတဲ့ ရင်နှစ်မြွှာနဲ့ ကျွန်တော့်ဖွားဖက်တော်ကို ပွတ်သပ်နေပါတယ်…ဘာတွေလုပ်နေလုပ်နေ သူမရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ အမူအကျင့်ကိုလဲမပြောင်းလဲလိုက်ပါဘူး..ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့..သူမနို့၂ဖက်ကို ပူးကပ်အောင်လုပ်ရင်း ကျွန်တော့်ကို ရင်သားကို -ိုးသလို လုပ်နေစေပေမယ့် သူမရဲ့ အနည်းငယ်ရှည်တဲ့ လျှာချွန်ချွန်လေးနဲ့ဒစ်ထိပ်ဖျားကို တို့ထိကလိနေပြန်တယ်။“ကိုကိုရယ် လုပ်ပါ…သမီး နောက်ပေါက်ကို -ိုးပြီး အထဲကို အရည်တွေဖြည့်ပေးပါ” ကျွန်တော် ငြင်းဆန်ဖို့ ပါးစပ်ဟလိုက်ပေမယ့် အသံထွက်မလာပါဘူး..ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက သူမက ကျွန်တော့်အားနဲချက်တွေရှာရာမှာ တအားကိုကျွမ်းကျင်ခဲ့ပါတယ်…မသိသင့်တဲ့အားနည်းချက်တွေရောပေါ့….“ဆံပင်ကိုဆွဲပြီး သမီးကို ခပ်မြန်မြန်လေးနဲ့ တအားကောင်းအောင် -ိုးပေးပါကိုကိုရယ်နော်…အဲလိုလုပ်ပေးရင် ကိုကို့ကို ထပ်မနှောင့်ယှက်တော့ဘူးလေ နော်”“အာ..ဟာ၊ နော်..လုပ်ပါ…သူများတွေ မသိပါဘူး ကိုကိုရဲ့…နော်”ရှေ့ကိုထပ်တိုးရင်း ကလေးဆန်သော အပြုံး၊ အမူအရာတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော့်ခါးကိုဖက်ရင်း သူ့နို့တွေနဲ့လည်း ဒုတ်ကိုဖိရင်း…အိုး….တပြိုင်တည်းကိုဗျာ..အစုံလုပ်နေ ဂျီကျနေတော့တာပဲ…. “ဟေးးး…..ဟန်နာ ဘီယာထပ်တောင်းနေတာလား ဟေ့ကောင်ကြီး….ဖြေးဖြေးသောက် ဟန်နာရေ…မင်းအကိုစကားနားထောင်ဟ”သူငယ်ချင်းတသိုက်က ကမ်းခြေကနေ သူတို့ရဲ့ မျက်နှာသုပ်ပဝါ၊
ပစ္စည်းတွေကောက်သိမ်းရင်း ရယ်မောရင်း ခပ်နောက်နောက်လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်…ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နေရာကိုသူတို့မှ သေချာမမြင်ရတာကိုးဗျ… သူတို့မြင်ကွင်းအရကတော့ သူမက ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားကိုဝင်ပြီး တခုခုကို အတင်းအတောင်းဆိုနေတဲ့ ပုံစံသာမြင်နေရတာကိုး…တကယ်လို့သာ သူတို့ဘယ်ဘက်ကို ၁ဝပေလောက်ထပ်ရွှေ့ခဲ့ရင်တော့ ကျွန်တော်ရဲ့ ပြင်းထန်စွာ ထောင်နေတဲ့ ဒုတ်ဟာ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ လှပတဲ့ နို့၂လုံးရဲ့ ဖိထားခြင်းခံရတာကိုမြင်ကြမှာပါ… ကျွန်တော် အိနြေ္ဒပြန်ဆည်ရင်း သူတို့ကို ခေါင်းငြိမ့်ပြကာ လက်လှမ်းပြရင်း အပြုံးနဲ့သာ ပြန်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်..ပီးတာနဲ့ သူမကို ဒေါသထွက်ယောင်ဆောင်ပြီး မျက်မှောင်ကြုံ့ရင်း…“အမ်…အန်နာ….ပြသနာပဲ…ငါတို့ကို မိသွားပြီး သိက္ခာကျကုန်မယ်…ငါတို့နောက် ၂ရက်ထပ်နေရမှာ သိတယ်မလား”သူမ တခိခိရယ်ရင်း ကမ်းခြေကနေ တဖြည်းဖြည်းထွက်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလှမ်းလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်…ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ကျွန်တော့်ဘက်ပြန်လှည့်လာပြီး သူမရဲ့ ရေကူးဝတ်စုံကိုအပေါ်ပိုင်းချွတ်ချပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတ်ပေါ်မေးစေ့တင်ထားကာ… အန်….လုပ်လေ ကိုကို…သမီးကို ကိုကို့ဒေါသတွေ ပုံချလိုက်စမ်းပါ..ခပ်ကြမ်းကြမ်းကို သင်ခန်းစာပေးလိုက်စမ်းပါ…အဲ့ဒီ ချုပ်တည်းထားမှုတွေကို ပစ်ထုတ်ပြီး အားရပါးရသာ-ိုးစမ်းပါ..ကိုကို့ရဲ့လရည်တွေစုထားတဲ့ ဒုတ်ထွားထွားကို သုံးပြီး သမီးကို အပြစ်ပေးစမ်းပါ…လာပါ….လုပ်လေ…” သူမ အဲလို စကားလုံးတွေသုံးလာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ထပ်ဆူဖို့ကြိုးစားပေမယ့် မရတော့ဘူး…ကျွန်တော် ထပ်လဲအချိန်မဆွဲချင်တော့ဘူး… ကျွန်တော်ဘာမှထပ်ပြောမနေတော့ပဲ သူမရဲ့ ရေစိုနေတဲ့ဆံပင်လေးတွေကို စုသိမ်းရင်း တဖက်သို့ ချထားပြီး သူမလည်တိုင်ကို အသာကိုင်ကာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတ်ကိုသူမရဲ့နှုတ်ခမ်းနဲ့တေ့ပေးလိုက်ပါတော့တယ်….သူမဆီကနေစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အသံခပ်စူးစူးလေတချက်ပေါ်လာတယ်ဗျ…ဘယ်လောက်များတော်လဲဆိုရင်..သူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကို သူမနို့၂ဖက်ကိုပူးကပ်စေရင်းကျွန်တော့်ဒုတ်ကိုရသလောက်ညပ်ထားသလို ပါးစပ်ကလည်း ဒစ်ကိုစုပ်နေတယ်ဗျာ… ကျွန်တော့်လက်၂ဖက်ကို ကျောက်တုံးတခုပေါ်ထောက်ရင်း သူငယ်ချင်းတယောက်ယောက်များပြန်လာမလားလို့လဲ စူးစမ်းရသေးတယ်….ဝှူး…မလွယ်လိုက်တာ… ရေလှိုင်းခတ်နေသံ၊ သူမရဲ့ ခံစားမှုအပြည့်နဲ့ ငြီးတွားနေတဲ့အသံတွေဟာ အရင်အခေါက်ထက်တောင် ကျွန်တော့်စိတ်ကို လှုပ်ရှားစေသလို ခံစားမှုရသတခုကိုပါ ပေးနေပါတယ်..သူမကလဲအဆက်မပြတ်ကို ကျွန်တော့်ဒုတ်မှာ အရည်ကြည်စိုစွတ်လာအောင်ကို ဒစ်ထိပ်ကိုလျှာနဲ့ယက်နေ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ရသလောက်စုပ်နေတဲ့အပြင် လက်နှစ်ဖက်ကလည်း သူမရဲ့စိုစွတ်နူးညံ့နေတဲ့ရင်နှစ်မြွာနဲ့ ဒုတ်အောက်နားကို အဆက်မပြတ် ပွတ်နေပြန်ပါတယ်….ခဏနေတော့ သူရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ပြီး သူမအင်္ကျီကို အကုန်ချွတ်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုလဲနောက်ကိုအသာတွန်းလှဲချကာ သူမကိုယ်တိုင်လဲ ရေထဲကနေတက်လာပြီး ငတ်မွတ်စွာနဲ့
ကျွန်တော့်ကို နှုတ်ခမ်းခြင်း ခပ်ဖွဖွတေ့ကာ ကစ်စင်ဆွဲပါတော့တယ်… သူမနှုတ်ခမ်းတွေဟာ နူးညံ့ချောမွတ်ပြီး စွဲမက်စရာပါ၊ သူမကျွန်တော့်ကိုနမ်းလိုက်တဲ့ခဏမှာ ကျွန်တော်ဟာ သူမကို လွတ်ထွက်မသွားအောင် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပွေ့ဖက်ထားမိတဲ့အပြင် သူမကိုမလုပ်ပဲမနေနိုင်အောင်ကို ခံစားမှုဖြစ်လာပါတယ်..သူမ ကျွန်တော့်ကိုခွပြီး ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ရေကူးအင်္ကျီကိုလဲ တဖက်ကိုပုံချထားလိုက်တော့ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလေးဟာထင်ထင်ရှားရှားကို ပေါ်နေတာဗျာ…. ကျွန်တော့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်မနဲ ထိန်းနေရတယ်…အောက်ကကောင်ကလဲ တဆတ်ဆတ်ပေါ့..ချက်ချင်းပဲ သူမ ကျွန်တော်လိင်တံကိုဖြည်းငြင်းစွာနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တယောက် ရုတ်တရက်လေထဲ လွင့်သွားသလိုတောင်ခံစားရတယ်..အဆုံးထိထည့်ပြီးတာနဲ့ ၂ယောက်လုံးမလှုပ်ရှားကြပဲ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ငြိမ်သက်စွာနေပြီး အနမ်းမိုးတွေဆက်ရွာလိုက်ကြတယ်…နမ်းနေရင်း သူမကျွန်တော့်နားနားကိုကပ်ပြီး ပြောလိုက်တဲ့တချို့စကားလုံးတွေက မမေ့နိုင်စရာပါ… “ကိုကိုနဲ့ချစ်ချင်တာကြာပြီ”“ကိုကို့ပစ္စည်းကအရမ်းမိုက်တာပဲ”“ကိုကို့ကိုချစ်တယ်”လို့ပြောတဲ့နောက်ဆုံးစကားကတော့ ကျွန်တော့်ရင်ကိုအလှုပ်ခတ်စေဆုံးပါ..ကျွန်တော် သူ့ကိုပြန်ပြောနိုင်တာ တခုတည်းကတော့ “ညီမလေးကိုလိုချင်ပီကွယ်”…. ညင်းသွဲ့သွဲ့ငြီးတွားသံနဲ့အတူ သူမကျွန်တော့်လည်ပင်းနားကနေ သိုင်းဖက်ပြီး အနမ်းမိုးလဲစွေရင်း အောက်ပိုင်းကိုလဲလှုပ်ရှားမှုစတင်လိုက်ပါတယ်…တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူမလှုပ်ရှားမှုတွေဟာမြန်ဆန်သွက်လက်လာပြီးငြီးတွားသံကလည်းပိုကျယ်လာလေတော့တဲ့အပြင်တဖတ်ဖတ်အသံပါမြည်လာအောင်လှုပ်ရှားပါတော့တယ်…ဒုက္ခပဲ…ခုလိုမျိုးသာကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့လှုပ်ရှားမှု၊နူးညံ့နွေးထွေးတဲ့အတွင်းသားရဲ့အထိအတွေ့နဲ့ဆိုသေချာတယ်ကျွန်တော်ခဏနေပြီးတော့မှာ…ကျွန်တော်ကြာကြာထိန်းနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး…သူမငြီးတွားသံတွေတဖြည်းဖြည်းကျယ်လာနေပြီး အရှိန်တက်နေတုံး ကျွန်တော် ရုတ်တရက်ဆို သူမကို အသာတွန်းလိုက်ပြီး… “လှည့်လိုက်…အရမ်းမအော်နဲ့”သူမ ခေါင်းကိုသာ အသာငြိမ့်ရင်း ရေတံခွန်ဖက်မျက်နှာလှည့်ကာ လက်၂ဖက်ကို ကျောက်တုံးပေါ်တံတောင်ဆစ်နဲ့ထောက်ရင်း တင်ပါးကိုမြောက်နိုင်သမျှမြောက်အောင်ထောင်ပေးထားပါတယ်…ကျွန်တော် စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက် သူမပစ္စည်းအတွင်းပိုင်းကို လက်နဲ့ ကလိဆော့ကစားရင်း သူမကိုမချိတင်ကဲဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားသလိုကျွန်တော့်ကောင်ကိုလဲနောက်တခေါက်ထပ်ထည့်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေလိုက်ပါတ,ျ
သူမကျွန်တော့်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့မျက်နှာက “လုပ်လေ” လို့ပြောနေသယောင်…ကျွန်တော်ကတော့ မသိကျိုးကျွံပြုရင်းရေတံခွန်ဆီလှမ်းကြည့်နေလိုက်ပါတယ်…အဲ့ဒါမှလည်း ကျွန်တော်နောက်တခါ ခပ်ကြာကြာ ထည့်နိုင်လုပ်နိုင်မှာကိုးဗျ… ကျွန်တော် သူ့ရဲ့ ကာမရည်တွေစိုစွတ်နေတဲ့လက်ချောင်းကို အသာထုတ်ပြီး စအိုဝနားတလျှောက် ပွတ်သပ်နေလိုက်၊ အနဲငယ်အားထည့်ပြီး အနောက်တံခါးဝကို ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားလိုက်လုပ်ကြည့်နေပါတယ်..သူမခမျာမှာလည်းကိုယ့်လက်ကိုယ်ပြန်ကိုက်လိုက်၊ငြီးတွားလိုက်နဲ့ခန္ဒာကိုယ်တခုလုံးကိုလည်းခပ်သာသာတုန်ယင်နေပါတယ်…အဲ့ဒီနောက် သူမဆီကအော်ဟစ်ငြီးငြူသံတွေမကျယ်လာခင် လက်ကိုအသာထုတ်ပြီး ကျွန်တော့်ဒစ်ထိပ်ကို အသာတေ့ကာ အနောက်တံခါးဝကို စဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်…သူမရဲ့တင်ပါးကိုလက်ကိုတင်ပြီးသူမခံနိုင်သလောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရမ်းကိုကျပ်သိပ်လှတဲ့အပေါက်လေးထဲထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်… ၂မိနစ်လောက် ကြိုးစားပြီး ခပ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သတိထားပြီး သူမ မနာမကျင်အောင်ထည့်ပြီးတဲ့နောက်တော့သူမရဲ့တင်ပါးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်လာထိတဲ့အချိန်ခံစားရမှုဟာလည်းနောက်တကြိမ်မိုးပေါ်လွင့်သွားသလိုပါပဲ..သူမကိုယ်တိုင်လဲ ကျွန်တော့်နာမည်ကိုငြီးတွားခေါ်နေရင်း မျက်လုံးလေး မှေးစင်းလို့..သူမကို ဆံပင်ကနေဆွဲပြီး ကျွန်တော်နဲ့နီးအောင် ဆွဲယူလိုက်ပြီးနောက်လက်တဖက်ကတော့ သူမအသံမထွက်အောင်ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားရတာပေါ့…သူမလဲ မျက်လုံးမှေးစင်းရင်း သက်ပြင်းများချရင်းမပီမသစကားလုံးများကိုလည်းပြောနေရင်း ငြီးတွားသံများလဲပြုနေပါတော့တယ်၊
သူမဟာအခုဆိုရင်လေးကိုင်းပုံစံကွေးကွေးလေးနေရင်း သူမရဲ့ နောက်ပေါက်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတ်တခုလုံး သာသာယာယာဝင်ထွက်လုပ်နိုင်အောင်ကို အဆင်ပြေနေပြီဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်သူ့ပါးစပ်ကိုအုပ်ထားတဲ့ လက်တဖက်ကို ခပ်ဖြေးဖြေးဖယ်ကြည့်လိုက်ပေမယ့် ညီမလေးဆီကတော့ ကျယ်လောင်တဲ့ ငြီးငြူသံမထွက်လာတော့ပဲ အနည်းငယ်နာကျင်မှုနဲ့ ခံစားမှုရောထွေးနေတဲ့အရသာကို ခံစားနေရတယ်ထင်တယ်..အဲ့နောက်တော့ လက်တဖက်က ဆံပင်ကိုအသာဆွဲရင်း ကျွန်တော်နဲ့နီးအောင်ဆွဲယူလိုက်သလို နောက်လက်တဖက်ကလည်းလည်ပင်းကိုမအစ်နေရအောင် ခပ်ဖွဖွကိုင်ထားရင်း စည်းချက်ကျကျလုပ်ဖို့ စတင်ကြိုးစားနေတုံး သူမကလည်း ကျွန်တော့်ခါးကိုပြန်နောက်ပြန်ပြန်ဖက်ရင်း သူမကိုသူမတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းပေးထားတယ်ဗျ၊ “နင်ဖင်ကို နင့်အကိုကပြန်-ိုးတာခံချင်တာမလား၊ ငါ့လရည်တွေ နင့်ထဲကိုဖြည့်ပေးရမလား၊ နင်လိုချင်တာ ဒါမလား အန်နာ..ဟင်… နင်အကိုက နင့်ကိုအထိန်းအကွပ်မရှိ -ိုးစေချင်တာမလား”သက်ပြင်းချသံနဲ့အတူ ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းကိုယ်ပြန်ကိုက်လိုက်ပြီး ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင်ငြိမ့်ပါတော့တယ်..ပြီးတော့ ခပ်တိုးတိုးနဲ့ “လုပ်ပါ ကိုကိုရယ်”ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို အဆုံးထိထုတ်လိုက် ခပ်ပြင်းပြင်းအဆုံးထိပြန်ထည့်လိုက် လုပ်တဲ့အခါ ပြင်းပြဆန္ဒသံများသာ သူ့ဆီက ငြီးငြူထွက်လာပါတော့တယ်..ကျွန်တော်ထပ်အချိန်မဆွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်..ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရာဘာလက်အိတ်ခပ်ကျပ်ကျပ်တခုစွပ်ထားသလို တင်းကျပ်နေတဲ့ သူမအတွင်းသားနံရံတွေက ကျွန်တော့်ကောင်ကို ပေါက်ထွက်စေတော့မယ်လေ…ကျွန်တော် လည်ပင်းကိုကိုင်ထားတဲ့ လက်တဖက်ကိုလွှတ်ပြီး သူမှတင်ပါး၂ဖက်ကို ခပ်ဆတ်ဆတ်ကလေး ၂-၃ချက် ရိုက်လိုက်ပါတယ်..သူမတချက်တချက်တွန့်ကနဲ့ဖြစ်သွားပြီး ကျွန်တော်နားကိုပိုပိုတိုးကပ်လိုက်တဲ့အတွက် သူမရဲ့ ဆာလောင်နေတဲ့ နောက်ပေါက်ကို ကျွန်တော်-ိုးရတာပိုလွယ်ကူစေပါတယ်..သူမကိုယ်သူမအထိန်းအကွပ်မဲ့စွာပဲ ရင်သားတွေကိုညစ်နယ်လိုက်
ခန္ဒာကိုယ်အနှံ့ပွတ်လိုက် သူမအစိလေးကို ပွတ်နေလိုက်လုပ်နေပါတော့တယ်.ကျွန်တော်လဲ သူ့နားနားကပ်ရင်း အနည်းငယ်ပြောရင်း ခပ်သွက်သွက် လှုပ်ရှားနေတဲ့အခိုက် သူမဆီက ငြီးတွားသံမှတပါး အခြားဘာသံမှထွက်မလာပဲ တဖြည်းဖြည်းခန္ဒာကိုယ်တခုလုံးတုန်လာကာ… “ခပ်ပြင်းပြင်းလေး -ိုးစမ်းပါ…ခု လရည်တွဖြည့်ပေးပါ”ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အန်နာခပ်မြန်မြန် လှည့်လာပြီး ဒုတ်ကိုအရင်းနားက ကိုင်ကာ လက်တဖက်ကခပ်မြန်မြန်ဂွင်းတိုက်ပေးပြီး ဒစ်ထိပ်ဖျားကို လျှာနဲ့လိမ်ဆွဲလိုက်စုပ်ယူလိုက်တဲ့ခဏလေးမှာတင်ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပူနွေးတဲ့ ခပ်ပျစ်ပျစ် လရည်တွေဟာ သူမပါးစပ်ထဲကို အားရပါးရ ပန်းထွက်သွားပါလေတော့တယ်…..ကျွန်တော်လည်း အော်ဟစ်ငြီးငြူသံအစုံနဲ့အတူ လူလည်း ကော့ပျံလန်လို့ပဲ..ကျွန်တော် ကျေနပ်အားရအောင် ပန်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သူမကို အနမ်းတချက်ပေးရင်း ကျွန်တော့်နှလုံး ရုတ်တရက် ရပ်သွားမလား ထင်ရလောက်အောင်မြင်မိတာကတော့ ကမ်းခြေမှာကျွန်တော်သိပ်မရင်းနှီးတဲ့ အတွဲတတွဲဟာ ကျွန်တော်တို့ကိုထိုင်ကြည့်နေတာပါပဲ…အမျိုးသမီးရဲ့ လက်တဖက်ဟာဆိုရင်လည်း သူမရဲ့ ပေါင်ကြားထဲကို နှိုက်ထားတာမြင်နေရပါတယ်… “ဟာ…အန်..အန်နာ…ငါတို့ကိုကြည့်နေတဲ့သူရှိတယ်”သူမ မကြည့်အားပါဘူး…ခုချိန်ထိကို ကျွန်တော်ဒုတ်ကို အားပါးတရစုပ်နေတုံးပါပဲ…. ကျွန်တော့်ကတော့ ရှက်ရွံ့မှု၊ ကြောက်လန့်မှုနဲ့ ညီမလေးဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ဆိုတဲ့ အတွေးပေါင်းများစွာ ချာချာလည်ရင်း…. ဒီ ညနေခင်းတခုကိုတော့ မေ့နိုင်တော့မယ်မထင်တော့ပါဘူးဗျာ
နွား ငတ် ရေ ကျ